चारआली जङ्गलमा ह ,,त्या गर्नुको कारण यस्तो छ भन्दै आफन्त मिडियामा, अन्ततः खुल्यो डरलाग्दो भित्री रहस्य, सबै चकित, अन्डकोष फुटाएर यस्तोसम्म गरे, सुरुदेखीको सम्पुर्ण नालीबेली (भिडियो सहित) – Complete Nepali News Portal
चारआली जङ्गलमा ह ,,त्या गर्नुको कारण यस्तो छ भन्दै आफन्त मिडियामा, अन्ततः खुल्यो डरलाग्दो भित्री रहस्य, सबै चकित, अन्डकोष फुटाएर यस्तोसम्म गरे, सुरुदेखीको सम्पुर्ण नालीबेली (भिडियो सहित)
झापाको गाउँले होटल बिर्तामोडका सञ्चालक तिलक निरौला चारआली जंगलमा मृत अवस्थामा फेला परेका छन । त्यससंगै जङ्गलमा एकाएक मानिसहरुको भिड बढेर प्रहरीलाई समेत अनुसन्धान गर्न गाह्रो भएको थियो । रहस्यमय मृत्यु भएका तिलक बिर्तामोड मनमोहन हस्पिटल छेउमा रहेको गाउँले होटल संचालन गर्थे । छिमेकीहरुका अनुसार सारै मिलनसार उनी सबैका प्यारा थिए । कसैले नसोचेको भयो भन्दै धेरै चिन्तामा देखिन्थे उपस्थित सबै । तिलक निरौला मोटरसाइकलसहित २ दिनअघि देखी बेपत्ता भएको सामाजिक सञ्जालमा सूचनाको रुपमा आएको थियो । खोजी कार्य तिब्र रुपमा गरेको परिवारले कतै भेट्न सकेन । उनको बारेमा मे. ९ प २२०९ नम्बरको साइन मोटरसाइकलसहित निरौला बेपत्ता भएको सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएको थियो । चारैतिर चर्चा चलेको थियो ।
बिर्तामोड-५ बस्ने निरौलाको शव जंगलमा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । लाश जंगलभित्र रहेको र ह त्या भए नभएको बारेमा अनुसन्धान गर्न प्रहरी टोली कुकुर सहित घटनास्थल पुगिसकेको र प्रारम्भिक अनुसन्धान समेत सुरु भइसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ । घटनास्थलमा पुगेर प्रहरीले घटनाबारे थप अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । शब पोस्टमार्टमका लागि पठाइसकेर तिब्र गतिमा अनुसन्धान गरिदै गरेको प्रहरीले जनाएको छ । आज गाउँले होटलमै पुगेर तिलककि ८० बर्षकि वृद्ध आमा र आफन्तसंग कुराकानी गरिएको छ । उनिहरुले रुदै यस्तोसम्म सुनाए कि त्यहा उपस्थित सबैजनाको आँसु नै खस्यो । एकाएक रुवाबासी नै चल्यो । आमाले बोलेका हरेक शब्दले सबैको मन छोयो । । आफन्त र बहिनीले रुदै खोले सुरुदेखिको कसैले नसोचेको डरलाग्दो भित्री रहस्य र नालीबेली । आफन्तहरुले सुनाएको यस्तो पीडा सुनेर कस्को मन रुदैन होला! चारआलीको जङ्गलमा लगेर ह त्या गर्नुको यस्तो डरलाग्दो भित्री रहस्य र नालीबेली आफन्तले खोल्दा सबै चकित भए । सुरुदेखि आजसम्मको सम्पुर्ण नालीबेली तलको भिडियोमा हेर्नुहोला आँसु आउनेछ |